Oge Ọgụgụ: 8 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 30/10/2020)
The ụlọ ọrụ ka ogologo kwagara oge a docks na docks na ugwu, na ọtụtụ ndị na ụgbọ mmiri na ochie n'ọdụ ụgbọ mmiri bụ maka obi ụtọ.
Marseilles emi odude ke 773 km n'ebe ndịda nke Paris. Paris na Marseilles Njem njem ụgbọ okporo ígwè dị mfe. Direct ụgbọ oloko Paris na Marseilles ahapụ Paris Gare de Lyon ije 3.5 awa. Ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị na-Marseilles on n'oge okpomọkụ ná ngwụsị izu anyị nwere ike ikwu ntinye akwụkwọ ndị gbaa ụgbọ okporo ígwè ọma tupu.
ugbu a, ọtụtụ n'ime Rouen si n'okporo ámá anọgide pedestrianized, nke pụtara na a mkpagharị site n'obodo n'ezie ele akin ka n'itinyekwu azụ na oge. Ọ dịghị ụgbọala, cobbled Lanes, a ọdụ ụgbọ mmiri ebe, na ọbụna ihe ochie district: ihe na-agaghi ahu n'anya? Gaa Leta Rouen n'oge June-September na ị ga-ọbụna na-emeso na a free ọkụ ngosi na katidral mgbe anyanwụ dara na mgbede tent na.
Lyon dị 463 km si Paris, njem nke ụbọchị a site na Paris, ga-ịme ka ị na nke abụọ kasị ukwuu na obodo na France nke bụ nnọọ ihe dị iche iche karịa Paris. Paris na Lyon Njem njem ụgbọ okporo ígwè bụ ngwa ngwa. Azụ Paris na Lyon ezumike Paris Gare de Lyon hour obula maka a njem nke gburugburu 2 awa, dabere na ụgbọ okporo ígwè.
La Rochelle emi odude ke 469 km si Paris. Paris na La Rochelle Njem njem ụgbọ okporo ígwè dị mfe. Direct TGV ụgbọ oloko na La Rochelle ahapụ Paris Gare de Montparnasse na ejikọta Paris na La Rochelle na naanị 3 awa.
Deauville-achọta na Normandy n'ụsọ oké osimiri, n'akụkụ ka Trouville na n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ-nke Honfleur. A akụkụ nke 'Normandy Riviera' Deauville bụ a mara oké osimiri na-n'akụkụ obodo. Ọ nwere oké osimiri, nnukwu ụlọ, nnukwu ụlọ ahịa, na-eme kwa afọ film ememme. Ọ bụghị banyere ya ma ama agbụrụ-track, gọọlfụ yana cha cha. Gịnị ọzọ nwere ike ị chọrọ?
Deauville bụ ezigbo onye mgba maka njem otu ụbọchị site na Paris, bidoro ndụ dịka ọhụụ nke nwa nwanne Napoleon nke atọ. Si n'akụkụ obodo nke Trouville, o lere anya n'ofe marshes na dunes na kpebiri-ewu a agbụrụ-track. Mara Villas e wuru n'etiti agbụrụ-track na oké osimiri na Deauville mụrụ.
Deauville emi odude 220 km n'ebe ọdịda anyanwụ nke Paris. Paris na Deauville Njem njem ụgbọ okporo ígwè bụ n'ezie mfe. Direct azụ Paris na Deauville ezumike Paris Saint Lazare ọdụ ụgbọ okporo ígwè hour obula na ụgbọ okporo ígwè na njem dịruru 2 awa.